Geli Soosaarayaasha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Gali Warshadda Caaryada
Gali Mindinga waxaan sidoo kale uyeelanay waxqabad bir ah ama bir fur ama wax taaj oo kale ah, ama mararka qaar waxaan ugu yeernaa isbadal galinta sidii wax ka badan.
Gelinta wax ka sameynta ku lug leh warshado badan oo kala duwan sida qalabka guryaha, aaladaha, qeybaha korantada, gawaarida, caafimaadka iyo warshado badan.
Geli bixiye caaryada
Sidee loo hagaajiyaa qaybahaaga qaabaysan oo lagu xalliyaa arrimahaaga tiknoolajiyada wax lagu duubo ee la geliyo?
Haddii naqshadeynta qaybtaadu u baahan tahay waxyaabo la gelinayo, tiknoolajiyada wax lagu dhejiyo geli waa ikhtiyaar ku habboon halkii laga heli lahaa qalabka, iskuxirayaasha, dhejiyeyaasha, ama kooladaha mashaariicdaada.
Waa maxay wax taaj oo kale
Mindhicirku waa geedi socod caag ah oo wax lagu duubo oo qayb hore loo sii geliyey la geliyo caaryada, ka dibna lagu durayo cusbada caagga ah, walxaha la shubayna wuxuu ku xidhan yahay galka, la qaboojiyey oo la adkeeyey.
Tilmaamaha ku saabsan naqshadeynta qaybta & gelinta caaryada wax taaj oo kale ah
1. Shuruudaha loo baahan yahay waxyaabaha la gelinayo: adkaanta, adkaanta, yaraanshaha, barta dhalaalida
2. Naqshadaynta qaybaha waa inay ahaato mid ku habboon rakibaadda iyo hagaajinta caaryada si looga hortago in qaybaha ay ka leexdaan ama dabacsanaadaan saameynta miisaanka qulqulka leh.
3. Soosaarida saxnaanta iyo joogtaynta waxyaabaha la gelinayo
4. Xullo qaab-dhismeedka ku habboon ee caaryada ah, iyo waxyaabaha la gelinayo sidoo kale waxaa gebi ahaanba lagu xiri karaa xarkada
5. Heerka yaraanshaha ee birta wax lagu qalo ma aha mid isku mid ah, imtixaanka xadka ee qaabka iyo saxsanaanta cabirka meelaha muhiimka ah waa in horay loo sameeyaa.
6. Gelinta birta waxay leedahay suurtogalnimada cillad iyo barakac inta lagu guda jiro hawsha duritaanka, naqshadeeyahana waa in si buuxda looga fiirsadaa dhismaha caaryada si looga caawiyo xasilinta biraha la geliyay.
Maxay yihiin Codsiyada Mashiinka Mideynta?
Mashiinka wax lagu dhejiyo waxaa loo isticmaalaa warshado kala duwan oo loogu talagalay adeegsiyo kala duwan iyo codsiyada waxaa ka mid ah:
• Qalabka guriga
• Qaybaha korantada
• Hawada sare
• Qalabka caafimaadka iyo qalabka
Tani waa sida iyo sababta gelinta wax taaj oo kale.
Tan waxaa loo sameeyaa caagagga. Waxaa jira shirkado badan oo bixiya adeegyo wax lagu shaabadeeyo. Hubso inaad la xiriirto midka saxda ah ee shuruudahaaga wax lagu duubo.
Wax taaj oo kale duritaanka Iyadoo bir biraha, Wax taaj oo kale galinta caaga ah, Warshadda caaryada, Samaynta Qaab Muunad, Soosaarayaasha caaryada, Caaryada Custom,